बहामास I. चेस्टर कूपरलाई नयाँ पर्यटन मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्दछ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » बहामास ब्रेकिंग न्यूज » बहामास I. चेस्टर कूपरलाई नयाँ पर्यटन मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्दछ
बहामास ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • क्यारिबियन • सरकारी समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • मान्छे • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट
नयाँ बहामास पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री
बहामास पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरु र कर्मचारीहरुले उपप्रधानमन्त्री, माननीय I. चेस्टर कूपर, जो सेप्टेम्बर १ on मा, देश को आम चुनाव को एक दिन पछि पर्यटन, लगानी र उड्डयन मन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दछन्। डीपीएम कूपरको क्याबिनेट नियुक्ति प्रोग्रेसिभ लिबरल पार्टीको नयाँ प्रशासनले तोकेको पहिलो विभागहरु मध्ये एक थियो, जसले सेप्टेम्बर १,, २०२१ को चुनावमा विजय हासिल गर्यो।
व्यापार को अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ बहामा 'पर्यटन, उड्डयन र लगानी क्षेत्रहरु को दिगो विस्तार को लागी बिल्कुल महत्वपूर्ण छ।
मन्त्री कूपरको उर्जा र तीब्र ब्यापारिक चेतना बिल्कुल आवश्यक छ किनकि मन्त्रालयले पर्यटन सुधारको दिशामा जोड दिईरहेको छ।
श्री कूपर स्मारक कार्य को एक तीव्र जागरूकता संगै सुत्र मान्छन् कि अगाडि छ।
पर्यटन महानिर्देशक जोय जिब्रिलुले भने: "हामी पर्यटन मन्त्रालय मा मन्त्री कूपर को नयाँ नेतृत्व मा काम गर्न को लागी उत्साहित छौं, जो हाम्रो मन्त्रालय को लागी ज्ञान र अनुभव को धन उहाँले आफ्नो जीवनकाल कैरियर बाट कमाएको एक सफल को रूप मा ल्याउनेछन्। निजी क्षेत्र को नेता। मन्त्री कूपरको उर्जा र तीब्र ब्यापारिक समझशक्ति ठ्याक्कै चाहिन्छ किनकि हाम्रो मन्त्रालयले एक निरन्तर महामारी को बीच पर्यटन सुधार को लागी जोर जारी राखेको छ।
मन्त्री कूपर स्वीकार गर्दछ कि मा मुख्य व्यापार को सबै बहामास अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय द्वारा संचालित छ र व्यापार को अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ को समझ बाहामा 'पर्यटन को दिगो विस्तार को लागी बिल्कुल महत्वपूर्ण छ, उड्डयन र लगानी क्षेत्रहरु। निजी क्षेत्र को नेतृत्व मा धेरै सफलता हासिल गरेको एक को रूप मा, श्री कूपर स्मारकीय कार्य को एक तीव्र जागरूकता संगै छ कि राष्ट्र को नम्बर एक व्यापार को कप्तान ग्रहण गर्दछ। उहाँ आफ्नो प्यारो देश को सेवा मा चुनौती को लागी उठ्ने अवसर को आनन्द लिनुहुन्छ।
मन्त्री कूपर १२ को सबैभन्दा कान्छी हुन् र सेसिलिया कूपरसँग विवाह गरीन्। उनीहरु तीन सन्तानका अभिभावक हुन्।
उसको प्रारम्भिक संघर्षले उसलाई साहसी, लचिलो र विनम्र हुन धकेल्यो; गुणहरु जसले उनलाई राम्रो संग सेवा दियो उनी कर्पोरेट सीढी चढेर BAF ग्लोबल ग्रुप को अध्यक्ष र सीईओ र BAF वित्तीय र बीमा (बहामास) लिमिटेड को अध्यक्ष र सीईओ बन्न को लागी।
उनी बीमा सल्लाहकार समितिका उद्घाटन अध्यक्ष र बहामास भेन्चर फण्डका संस्थापक निर्देशक थिए। उहाँ युवा राष्ट्रपति संगठन (YPO), एक प्रतिष्ठित टोस्टमास्टर को सदस्य हुनुहुन्छ र विभिन्न निजी क्षेत्र बोर्डहरुमा सेवा गर्दछ।
उपप्रधानमन्त्री चेस्टर कूपर प्रोग्रेसिभ लिबरल पार्टी (पीएलपी) का उपनेता र एक्सुमास र रग्ड आइल्याण्ड निर्वाचन क्षेत्रका सांसद हुन्।